Al-Shabaab Oo La Wareegay Deegaan u jira wax ka yar 30 KM Magaaladda Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Al-Shabaab Oo La Wareegay Deegaan u jira wax ka yar 30 KM Magaaladda Muqdisho.
Maleeshiyaad Hubaysan oo Alshabaab ka tirsan ayaa lagu soo waramayaa inay la wareegeen Deegaan ka tirsan Gobalka Shabeelaha Dhexe, iyagoona Kaabiga ku haya Degmadda Balcad.
Dad Goobjoogayal ah ayaa u sheegay HornAfrik in Tuulada lagu Magacaabo Geed faqay oo Balcad u jirt 10km kaga beegan dhanka deegaanka Ceelashaa Biyaha ee duleedka Muqdisho ay la wareegeen Kooxda Alshabaab, Waxaana Deegaankan uu Istaraatiiji u yahay Magaaladda Muqdisho.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka Geed faqay ayaa waxa ay sheegeen in tiro Al-Shabaab ah ay deegaanka soo galeen isla markaana ay Shacabka Khudbad u jeediyeen. Waxaana ay ku booriyeen Dadka Deegaanka inay u diyaar garoobaan Dagaal ay la galaan Ciidamadda Amisom iyo kuwa Dowladda Somalia.
Weli dhnkooda kma hadlin Maamulka degmada Balcad la wareegitaanka Al-Shabaab ee deegaanka geed faqay,balse xiriir aan la sameynay kama jawabin taleefoonadeena.
Alshabaab hadda waxay u muuqdaan inay ku soo siqayaan Magaaladda Muqdisho xilli ay Dowladda Somalia ku dhawaaqday Guluf Dagaal oo ka dhan ah Maleeshiyadda Argagixisadda ah ee Alshabaab, Waxayna u muuqataa ka hor Abaabulka Dowladda inay iyagu billaabeen Weeraro iyo isbalaarin.
Waa Sidee Xaaladda Magaalooyinkii Somaliland ee ay Xalay Rabshaduhu ka dhaceen,?